Seddax ciyaaryahan oo isugu soo haray abaalmarinta xiddiga ugu fiican caalamka…. – Hagaag.com
Seddax ciyaaryahan oo isugu soo haray abaalmarinta xiddiga ugu fiican caalamka….
Posted on 4 Seteembar 2018 by Admin in Sports // 0 Comments
FIFA ayaa ku dhawaaqday magacyada ciyaartooyda isugu soo haray abaalmarinta xiddiga ugu fiican caalamka (FIFA The Best) isreereeb dheer kaddib.
Cristiano Ronaldo wuxuu ku tartamayaa inuu ku guuleystay koobka horyaalada yurub ee UEFA Champions League iyo sidoo kale gool dhalintiisa, halka Luka Modric uu ku tartami doono si la mid ah Ronaldo tartanka yurub iyo inuu gaaray final-ka koobka Adduunka.
24-ka bishan September ayaa abaalmarinta lagu bixin doonaa magaalada London.